कहाँ कहाँ पर्ला पानी ? वर्षा भने सामान्य नै हुने सम्भावना - Everest Dainik - News from Nepal
कहाँ कहाँ पर्ला पानी ? वर्षा भने सामान्य नै हुने सम्भावना
काठमाडौं, बैशाख १३ । शुक्रबार काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर जसो मौसम बदली भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
आज विशेषगरी देशका पूर्वी र मध्य क्षेत्रमा पानी पर्ने प्रक्षेपण महाशाखाले गरेको छ। अहिले काठमाडौं उपत्यकाको आकाश कालोमैलो भएको छ । त्रिभुवन विमानस्थल, बालाजु लगायतका क्षेत्रमा अहिले पानी परिरहेको महाशाखाले जनाएको छ।
याे पनि पढ्नुस 'मिस्टर एन्ड मिस टिन प्लानेट २०१८' को प्रथम अडिसन सम्पन्न
महाशाखाकी मौसमविद् विभूति पोखरेलका अनुसार पश्चिम पहाडका केही स्थानमा पनि आज वर्षाको सम्भावना छ। तर, त्यस्तो ठूलो वर्षा र हावाहुरीको सम्भावना नरहेको उनले बताइन् ।
‘सामान्य वर्षा हुने देखिएको छ,’ मौसमविद् पोखरेलले भनिन्, ‘एक–दुई घन्टापछि मौसम खुल्ने सम्भावना छ तर फेरि बदली हुने देखिन्छ ।’
उनले थपिन्, ‘अहिले प्रि–मनसुन सक्रिय भएकाले कहाँ–कति बेला मौसम बदली हुन्छ यसै भन्न गाह्रो छ ।’ पूर्वी क्षेत्रमा बनेको न्यून चापीय रेखाका कारण मौसम बदली भएको मौसमविद् पोखरेलेको भनाइ छ।
मौसम बदली शनिबारसम्म उस्तै रहने उनको अनुमान छ । ‘पर्सि पनि पूर्वमा त मौसम खराब नै हुने देखिन्छ, अन्य क्षेत्रमा चाहिँ केही सुधार हुने सम्भावना छ,’ उनले भनिन्।
याे पनि पढ्नुस नेपालमा पहिलो पटक भेन्डिङ उपकरण